Nje ukuba uthathe isigqibo sokuyisebenzisa | Ota Bunkanomori
Xa usebenzisa iholo, igumbi elinemisebenzi emininzi, igumbi lokubonisa, kunye neplaza
Ngokomgaqo la maxwebhu alandelayo kwinyanga enye ngaphambi kwethemba lokusetyenziswa kwemini emva kokuba izisiwe, nceda uye kumlindi kunye neentlanganiso ezaneleyo.
Inkqubo okanye itshathi yenkqubela phambili, amaphetshana, iitikiti zokwamkelwa okanye iitikiti ezinenombolo (njengesampulu)
Ukongeza koku kungasentla, iminyhadala yeholo (XNUMX) umzobo wokulungiselela isigaba, (XNUMX) umzobo wokulungiselela ukukhanya, kunye (XNUMX) nomzobo wokulungiselela i-acoustic.
(Ukuba ukhutshelwe ngaphandle kwikhontraktha, nceda usazise igama lekhontraktha kunye neenkcukacha zonxibelelwano.)
Xa usebenzisa igumbi lendibano, iworkshop, okanye studio
Nceda wazise idesika engaphambili malunga nobume bangaphakathi kunye nezixhobo ezinokubakho ubuncinci kwiintsuku ezi-2 phambi komhla wokusetyenziswa.
Kuxhomekeka kusetyenziso olucetywayo, sinokukucela ukuba ubenentlanganiso nabasebenzi.
Njengomgaqo ngokubanzi, iimpahla azinakuthengiswa kwizitudiyo nakwiindawo ezivulekileyo.
Ukusetyenziswa komlilo, njl. Icandelo lokuthintela iSebe le-Omori
I-1-32-8 i-Omorihigashi, iOta-ku, iTokyo Ifowuni: 03-3766-0119
Ukhuseleko njl. Isikhululo samaPolisa i-Omori
1-1-16 Omorinaka, Ota-ku, Tokyo Ifowuni: 03-3762-0110
Ukuphathwa kokutya Iziko lezeMpilo lewadi iOta kwiCandelo lezococeko lokuphila
1-12-1 Omorinishi, Ota-ku (kumgangatho we-6 weZakhiwo zikaRhulumente wase-Omori) Ifowuni: 03-5764-0691
Ulwazi ngeziganeko lunokuthunyelwa simahla kwimagazini yolwazi epapashwe nguMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi nakwiwebhusayithi. (Kuxhomekeka kumxholo, siza kujonga kwangaphambili.)
Ngomhla wosetyenziso, nceda ubonise ifom yokuvunywa kokusetyenziswa kulwamkelo kumgangatho we-1 ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Kwimeko yentlekele, nceda uthathe onke amanyathelo anokufumaneka ngesikhokelo sokufuduka, unxibelelwano olungxamisekileyo kunye noncedo lokuqala lweendwendwe.
Nceda uhambe nenkunkuma xa usitya okanye usela, okanye xa uyisebenzisa.Ukuba kunzima ukuyigodusa, siza kuyicubungula ngentlawulo, ke nceda usazise.
Umququzeleli unoxanduva lokucwangcisa kunye nokukhokela iindwendwe, ukubamba nokuzonwabisa.Ukuba kulindelwe ukuba inani elikhulu leendwendwe liza ngaphambi kwexesha lokuvula, okanye ukuba kunokwenzeka ukubhideka ngexesha lomsitho, luxanduva lomququzeleli ukwabela abaququzeleli aboneleyo.
Kuxhomekeke kumnyhadala, umququzeleli uya kulungiselela abasebenzi beqonga, ukukhanya, isandi, njl.
Sukutya, ungaseli okanye utshaye ngaphandle kweendawo ezichongiweyo.
Ukusetyenziswa kwegumbi elinokubakho izinto zokuthwala / zokuqhuba, siya kukunika itikiti lokususa indawo yokupaka simahla kuphela ngomhla wosetyenziso.Nceda ubuze abasebenzi malunga namagumbi anokuhanjiswa kunye nenani lezabelo.
Indawo yokupaka inomda wokuphakama we-2.8m kunye nomda wobude obuyi-5m.Qaphela oko.
Ukongeza, abathengi ngokubanzi, abanye abasebenzisi begumbi, kunye nabo bagqithisa kwinani lolwabiwo baya kuhlawuliswa umrhumo.
Nceda ungene ukusuka kumnyango wangaphambili kumgangatho wokuqala ngaphandle kwamanyathelo, ithambeka ekungeneni ngasemva, okanye indawo yokupaka kumgangatho ongaphantsi wokuqala.Nceda usebenzise ilifti ukufikelela kwigumbi ngalinye.
Iindawo zokuhlambela ezinamagumbi amaninzi (izindlu zangasese zakhe nabani na) zifumaneka kumgangatho ngamnye wesakhiwo seentlanganiso naseholweni (kumgangatho wokuqala, kwigumbi lokunxibela).